A380 နှင့်အတူ PA350 VC ကိုပေါင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သမျှဗူး, ပေါင်းမည်?
မေးခွန်း A380 နှင့်အတူ PA350 VC ကိုပေါင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သမျှဗူး, ပေါင်းမည်?
2 နှစ်ပေါင်း5months ago #481 by JanneAir15
ဟယ်လို! ငါ A350 ဗူးပေါင်းမည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြီငါသင်တို့အဘို့အရနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး A350 င်ထင် FSX အခုအချိန်မှာဒါပေမယ့်နှင့်အတူတစ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာရှိပါတယ်: ကနေဆဲယာဉ်များကဲ့သို့တူညီသော A320 / A330 ရှိပြီးငါကဒီလေယာဉ်မှ Project မှအဲယားဘတ်စ် A380 နေ VC ကိုပေါင်းစပ်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် (အဘယ်သူမျှမ A380 အတည်ပြုပြီးသောအခါကျေးရွာကော်မတီများရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့) ငါမရနိုငျသောအရင်းနှီးဆုံးင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအဘယျကွောငျ့ A350 VC ကိုပါပဲ။ ဒါကြောင့်သင်ဤအတူငါ့ကိုကူညီနိုင်မည်နည်း ယခုပင်လျှင်အချို့လဲ tutorial ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်အချည်းနှီး။
ဤတွင် A350 ပေါင်းစည်းမှုရဲ့:
2 နှစ်ပေါင်း5months ago #484 by Gh0stRider203
ငါရိုးသားစွာဤအမှုကိုပြုသောဘယ်တော့မှင့်အဖြစ်အမြန် Google Search ကို ပြု. , ဒီဗီဒီယိုကိုအတူတက်ရောက်လေ၏။ ငါကကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်!
2 နှစ်ပေါင်း5months ago -2နှစ်ပေါင်း5months ago #485 by JanneAir15
yeah ငါကမဖြစ်နိုင်ပါရဲ့နိဂုံးမှလာပါတယ်။ ကျွန်မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေနဲ့အရာအားလုံးကို check လုပ်ထားကြပါပြီဒါပေမဲ့သူတို့ MDLXMDLH နေပေမယ့်သူကဗီဒီယိုပြောပါတယ်ထားတဲ့မဖြစ်နိုင်ပါင်ပေမယ့်သူတို့ထဲကအရာအားလုံးအဘယ်သူမျှမစုံစမ်းပြီဒါကြောင့်ငါတကယ်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသောအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်စုံတစ်ဦးကအလုပ်လုပ်ကိုင်စေနိုင်သည်လျှင်မည်ကဲ့သို့ဒီနေရာမှာပြောပြပေးပါ။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း5months ago နေဖြင့် JanneAir15.
0.767 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်